ပုဒ်မ ၅၀၅ (က)ဖြင့် ဧပြီလ (၂၀) ရက်နေ့မှာ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ခံလိုက်ရတဲ့ အဆိုတော် ဟန်နေတာ အပါအ၀င် အယောက် (၂၀ )…. – Cele Snap
ပုဒ်မ ၅၀၅ (က)ဖြင့် ဧပြီလ (၂၀) ရက်နေ့မှာ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ခံလိုက်ရတဲ့ အဆိုတော် ဟန်နေတာ အပါအ၀င် အယောက် (၂၀ )….
အဆိုတော် ဟန်နေတာအပါအ၀င် အမှုဖွင့်ခံထားရသူတွေအထဲမှာ နှင်းပွင့်ဖြူ၊ ဟန်နေတာ၊ အောင်ကိုငြိမ်း ( J Fire) ၊ မင်းအောင်ခိုင် (ခ) အောင်ခိုင်ဆွေ၊သူရသက်တင်၊ နီလာစိန်၊ သိန်းဇော်၊ ရွှေရည်ဦး၊ ဇွဲလှိုင်မှီ၊ သက်ပိုင်၊ ဝင့်ဝါထွန်း၊ စိုင်းလောင်လျန်းပန်၊ မိုးတိမ်၊ အောင်ကျော်မိုး၊ ဟန်စိုး၊ ဟိန်းရာဇာထွန်း၊ နီလာဝင်း၊ ကိုဂျွန်၊ ခင်ဇော်နဲ့ မိုဃ်းသွေး ပါဝင်ပါတယ်။
ပုဒ်မ ၅၀၅-က ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ယနေ့ ထုတ်ပြန် ကြေညာသွားပါတယ်။အဆိုတော် ဟန်နေတာကတော့ လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့ထပ်တူ ရပ်တည်နေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ဒါ့အပြင်သူ့ရဲ့ အကောင့်ကနေလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာနေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်သမျှတွေကို ကမ္ဘာသိအောင် အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီဖော်ပြပေးခဲ့သလို အရေးကြီးလိုက်နာသင့်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကိုလည်း ဝေမျှပေးခဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုတော် ဟန်နေတာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့လ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက်နေ့ကတည်းက ပြည်သူအားလုံး စတင်ခဲ့တဲ့ တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကြီးမှာ လမ်းပေါ်ထွက်လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့အတူ အားဖြည့်ပါဝင်နေတာလည်း တွေ့ရပါတယ်..။ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလည်း နာမည်ကြီး အနုပညာရှင် တွေဖြစ်တဲ့ ပြေတီဦး ရဲတိုက်၊ပိုင်တံခွန်၊ ဇာဂနာ၊ဝင်းမင်းသန်း အိန္ဒြာကျော်ဇင် ဇင်ဝိုင်း အဆိုတော်ပိုပိုတို့လည်း ဖမ်းဆီးထိန်း သိမ်းခြင်းကို ခံခဲ့ရကာ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မျိုးသန္တာထွန်း ကိုလည်း ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
တကယ့်နာမည်ကျော် အနုပညာရှင်များစွာလည်း ဝရမ်းထုတ်ခံထားရတဲ့အတွက် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်.။ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) ဖြင့် အရေးယူခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ စာရင်းကို နေ့စဉ်ထုတ်ပြန်လျက်ရှိရာ ဒီကနေ့မှာတော့ ရအဆို‌တော် ဟန်နေတာလည်း ပါဝင်လာ တာဖြစ်ပါတယ်။